Kickdynamic: Ọdịnaya Email Hapụrụ Adị na Open | Martech Zone
Ọtụtụ afọ gara aga mgbe ị na-arụ ọrụ maka onye na-eweta ọrụ email na-eto eto, anyị jiri mpaghara ọdịnaya dị omimi na mkpọsa email nke ndị ahịa anyị. You nwere ike ịgbanwe ọdịnaya dabere na data ị jidere onye debanyere aha. Akụkụ siri ike bụ na a ghaghị ịhịa data ahụ ma webata ya na usoro na-agwụ ike. Mebe iwu na ndebiri adịghị mfe. Site na oge izipu email, a na-edozi ọdịnaya ahụ.
Anyị nwere otu onye na-ere ahịa njem nke nwere ndebiri nke nwere ọtụtụ narị iwu na mkpọsa ahụ. Fọrọ nke nta ka ọ bụla otu onye debanyere aha nwere 100% ahaziri email. Ọnụ ọgụgụ ha na-eghe oghe na mgbanwe ntụgharị rịrị elu.
Mgbe izipu email HTML, ezigara ederede mana a na-arịọ ihe oyiyi naanị mgbe onye debanyere aha ya -emepe ozi-e. Nke ahụ na-enye ohere pụrụ iche iji dozie ọdịnaya nke email ahụ dabere na ebe onye debanyere aha ya na ihe ha na-eme karịa data metụtara ndekọ ha.
Agbanwe bụ ozi email nke na - enye gị ohere iwulite ozi ịntanetị ndị siri ike, nke ahaziri iche nke gbanwere ọdịnaya ahụ n’oge mepere email! Lee ihe atụ ole na ole:
Ọnọdụ - Gịnị ma ọ bụrụ na m mepee ozi email nke dịdebere otu n'ime ọtụtụ ụlọ ahịa gị na mpaghara ahụ? Nwere ike igosipụta onyonyo nke ụlọ ahịa m kacha nso yana awa na ọnọdụ.
Device - Ọ bụrụ na m nọ na ngwaọrụ mkpanaka, ị nwere ike chọọ ịnye onyogyo ebuputagogo onyogho na nghọta karịa, ma ọ bụ onyinye akọwapụtara n’ekwentị.
Oge oge - Ọ bụrụ na m nwere asọmpi na ngụda, enwere ike igosipụta oge fọdụrụ na asọmpi ahụ n'oge mmeghe.
Weather - Ikekwe enwere oke ifufe na-agagharị na ịchọrọ ịkwalite ụfọdụ ngwaahịa ma ọ bụrụ na mmiri na-ezo.
Social - Ikekwe, achọrọ m ịkesa mmelite mgbasa ozi mmekọrịta m kachasị ọhụrụ!
Onye na-ewu Kickdynamic na-ewu ụlọ bụ ngwaahịa dị ike nke na-enye gị ohere iji iwu nnabata onye nnabata na-adabere na ihu igwe, ngwaọrụ, ụbọchị / oge, ọnọdụ iji gbanwee, bulie & melite onyonyo n'oge mmeghe. Nwere ike iji onye wuru onye okike were mepụta iwu dị mfe, ma ọ bụ jiri atụmatụ ya dị elu maka inwetara ngwa ahịa azụmaahịa na-emepe emepe oge niile.
Otu oru na ihe edeturu na nke a bu na ozugbo email meghere ma zigara onyogho… a kpochiri gi na onyogho ahu ezitere. Fọdụ ndị na-enye ọrụ andntanetị na ndị sava Email ndị ọzọ (dịka Exchange) na-echekwa onyonyo mpaghara na sava ahụ. Yabụ ọ bụrụ na ị kpebiri ime mgbanwe mgbe onye debanyere aha mepere email ahụ, ha ga-enweta onyunyo ahụ.
Anyị mere ụfọdụ ule na oge mbụ ebe anyị na-ezipụ akwụkwọ ozi ọhụụ anyị (ederede edere na eserese azụ) mana ebe URLa rịọrọ ka onyonyo ahụ agbanweghị site na email gaa email, otu onyonyo ahụ na-egosi. Ebe ọ bụ na ịnweghị ike ịgbanwe ọnọdụ onyonyo ahụ na efegharị na ebe HTML na-aga, ị nweghị ike ịlaghachi ma melite onyonyo ahụ.
N'agbanyeghị nke ahụ n'ezie Agbanwe na-ọkachamara na ụdị ndị a nke ezigbo oge ahaziri ọdịnaya na email. Yana ule na nchịkọta n'elu ikpo okwu ha, odi ka ha enweta ihe siri ike banyere ozi-e ahaziri iche.
Tags: email di omimiọdịnaya di omimi di omimiemailIkenna Nwokeahaziri ọdịnaya email